ဖန်မျှင်ထည်ပိုက်များတွင်ဖန်မျှင်ဖိုက်ဘာမှန်၊ သဲပိုက်များ၊ လျှပ်ကာပိုက်၊ PVC၊ CPVC, PE, PP, PVDF စသည်တို့ပါဝင်သည်။
၁ ။ Liner: အလတ်စားမှအကောင်းဆုံးခုခံဆုံးဖြတ်သည်။
၂ ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအလွှာ: မြင့်မားသောစက်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုနှင့်ဝန်ခုခံပေး။
၃ ။ အပေါ်ဆုံးအင်္ကျီ - ပိုက်စနစ်ကိုရာသီဥတု၊ ဓာတုဗေဒထိုးဖောက်မှုနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ပေးသည်။
၁ ။ အမျိုးမျိုးသောချေးသည့်အခြေအနေများအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်
၂ ။ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသည် (သံမဏိ ၂၀% အောက်၊ ကွန်ကရစ် ၁၀% ထက်နည်းသည်)
၃ ။ အလေးချိန်မှအလွန်အစွမ်းထက်သည် (သံမဏိထက်တန်းတူအလေးချိန်အပေါ်မူတည်သည်)
၄ ။ ပွတ်တိုက်မှုနိမ့်ကျသောကိန်းဂဏန်း (သံမဏိထက် ၂၅% ပိုကောင်းသည်)
၅ ။ ကောင်းသောရှုထောင်တည်ငြိမ်မှု
၆ ။ အနိမ့်အပူစီးကူး
၇ ။ အနိမ့်ရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်
မတူညီသောပူးတွဲနည်းစနစ်များစွာကိုဖိုက်ဘာမှန်ပိုက်များဖြစ်သောစတီးပူးတွဲ၊ စပီဂွတ်နှင့်ခေါင်းလောင်း၊ အနားကွပ်၊
၁။ လေမှုတ်သွင်းခြင်း၊ ရေမှုန်ရေမွှားနှင့်လေမျက်နှာပြင်ဖျာ၊
3. တောင့်တင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရောစပ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဗဓေလသစ်နှင့်မော်တာ (ဒီဇိုင်းပေါ် မူတည်၍) ထည့်ပါ
4. longitudinal နှင့် hoop လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် hoop နှင့် helix winding လုပ်ပါ။
၆။ ပိုက်၏အဆုံးများကို ဖြတ်၍ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ခေါင်းမာခြင်းနှင့်ပူးတွဲပါ ၀ င်ခြင်း (ပူးတွဲနည်းလမ်းပေါ်မူတည်) ။
ပိုက်များအတွက် 8. Hydrostatic စမ်းသပ်မှု။ အရည်အချင်းပြည့်မီပါကပိုက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
Jrain သည် DIN, ASTM, AWWA, ISO နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံအဆင့်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်ဖန်မျှင်ထည်ပိုက်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ပိုက်တစ်ခု၏စံအရှည်သည် ၆ မီတာသို့မဟုတ် ၁၂ မီတာဖြစ်သည်။ စိတ်ကြိုက်အရှည်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်လည်းသိရှိနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ Dual Laminate ထုတ်ကုန်များ
ဖန်မျှင်ထည်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုယေဘုယျအားဖြင့်လက် lay-up ဖြစ်စဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမြင့်မားသောဗဓေလသစ်ပါဝင်သည်။ ပုံသဏ္ာန်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ပုံသွင်းနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဗဓေလသစ်ကွဲပြားခြားနားသောအလယ်အလတ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေများအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္onာန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အထူးပစ္စည်းကိုမဆိုတောင်းဆိုမှုတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖန်မျှင်ထည်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြသောကြောင့်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ •အလေးချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောခွန်အား•လျှပ်စစ်နှင့်အပူလျှပ်ကာ•ချေးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ခေတ်သစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များဖြစ်သော FEA (Finite Element Analysis)၊ Auto CAD စသည်တို့ဖြင့် Jrain သည်ထုံးစံအတိုင်းပြုလုပ်ထားသော pre-fabricated fiberglass ပြွန်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ထို့နောက် Jrain သည်ဒီဇိုင်းများနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များအတွက်ပြွန်များကိုလုပ်နိုင်သည်။ 1 1 FGD စွမ်းအင်စျေးကွက်အသုံးချမှုများအတွက်ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသောပြွန်၊ ၂ ။ လက် lay-up သို့မဟုတ် helically ဒဏ်ရာ; ၃ ။ အမျိုးမျိုးသောတောက်ပသောပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးကိုထိန်းညှိရန်ဗဓေလသစ်4။ မီးဘေးဒဏ်ခံနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းသည်ပထမတန်းစားမီးလျှံ5spread ရောက်ရှိရန်5။ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ, cal ...
GRP အကွေ့အကောက်များသောစက်, မှို, FRP အကွေ့အကောက်များသောစက်, မှိုဖန်မျှင်ထည်, ပုံသွင်းဆန်ခါ, ဖန်မျှင်ထည်အကွေ့အကောက်များသောစက်,